Burmad iyo Bad-weynta Suugaanta | Vol: 01 – Cad: 78aad – Indheergarad
HomeSuugaanBurmad iyo Bad-weynta Suugaanta | Vol: 01 – Cad: 78aad
January 17, 2021 Maamulka Indheergarad Suugaan 0
Indheergarad – Jeenaweri 17, 2021 – Koobin – Vol: 01 – Cadadka: 78aad
“Sidiiq Maxamed Burmad waa hal’abuur ereyadiisu ku labisanyihiin hibo iyo farshaxannimo nooceeda beryahan naadirka ku ah suugaanyahanada. Waa Heello-maal heesihiisu baadi-sooc gaara leeyihiin oo qofka in uun yaqaana curinta suugaanta, aanay kaga dhex lumayn–qasmayn booshaaqa waayadan la tiriyo.” Sidaa waxa faallo ku bixiyey shan sanno ka hor Abwaan Xasan-daahir Weedhsame. Feegaaridda xarfo la baahiyey oo lagu qorey mareeg kama dhigna in aynu gudnay abaalka Suugaanyahan murtidiisa lagu dhayo boogo milil noqday oo baahan. Wacyiga suugaaneed ee heerka sare leh, af-gaabnida iyo mabda’a aan labac-labacda lahayn ee shaqsiyaddiisa ku lingaxan ayaa sifo kuugu filan. Qarnigan 21’aad Burmad suugaan shilis ayaa uu dunida keenay oo ay adag tahay inaynu maqli wayno.
Waa durdur suugaaneed aan gudhin oo haaneedaya mucdii iyo miidii qofnimo. Wuxuu taageeray oo suugaantiisa mucda lehi soo saartay hibada codeed ee Hobollo cirkaa tagay, oo aan hadda caad qarin karin “Cadceed duhur joogta sacabadu ma qariyaan.” Halkii ay lodkii hore ugu jireen Maxamed Cali Kaariye, Sulub, Axmed Saleebaan Bide I.q.k ayaa uu ugu jiraa jiilka dambe. Waa Caroog, loogu hadlo inta dareenadda kalgacaylku golongoliyeen. Caddad iyo tiro toona malaha inta uu Gar-yaqaan suugaaneed u yahay ee miciinsata Weedhaha maankiisa kasoo burqada. Khabiir weyn oo garaad ku ah ka dhex hadlida Quluubta dadka iyo Tarjumida Dhacdooyinka waayo-nololeed ee ku xeeran.
Burmad suugaantiisu waa mid baadi-sooc leh oo rajo iyo yididiilo ku abuurtay Shaqsiyadayda. Sabankan fanka laga dayriyo, kolka aan Midhihiisa maqlo Culays badan oo welwel i galin jirey ayaa iga dega. Ka Sokow garashada iyo barashada aan bartay Sidiiq, ilaa hadda waa dadka sida gaarka ah ii saameeyay. Nin dad jecel, gaar ahaan dhalinyaradu aad uga mahad sheegtaan. kolkii hore keligay ayaa ismoodayey inay aragtidaasi igu kooban tahay, balse markhaatigaasi waxa ii furay fan-goob Cumar Seerbiya oo isagoo Sidiiq sifaynaya laga hayo: “Astaan gobonimo, adkaysi iyo walaalnimo. qof kasta oo ay duruufaha nololeed kulmiyeen tan markhaati ayaa uu ka noqon karaa! Aniga oo og wanaagiisa ayaa aan arkaa dad kale oo ka mahad-sheeganaya. wanaag iyo gacan-qabasho ayaa uu astaan u yahay.”
Sawirka: Abwaaan Sidiiq Burmad.
Xirfadle ku dhowaad labaatan sanno ku dhex jirey Warbaahinta Soomaalida. Raadiyoow Hargeysa ayaa uu 2003-dii ka hawl bilaabay, aadna waxa loogu xasuustaa Barnaamijkii “Xulashada Raadhiyoowga” isaga iyo Raxma Abu-Hurayra. Walow waqtiyadii u dambeeyay uu Laanta af-Soomaaliga ee BBC-da uga warramayey Hargeysa. 1983-dii ayuu ku dhashay magaalada Hargeysa. Shan sanno waxa uu ka shaqaynayey oo uu tababare u ahaa Weriyayaal isaga oo u shaqaynayey Haayad Holandiis ahayd oo la odhan jirey ‘Free Press’. Shahaadada heerka koobaad waxa uu ka qaatay Jaamacadda haayadda Shaqaalaha Somaliland.
Fasalka toddobaad ayaa uu ku bilaabay Suugaanta, sida uu ku sheegay Waraysi laga qaaday. Afar goor ayuu uu ka qaybgalay tartan suugaaneedyo, waxaanu laba ka mid ah galay kaalinta 3’aad, halka labada kale uu ku guuleysay kaalmaha Koobaad iyo Labaad. Dhagteenu kolka ay maqasho magaciisa durba waxa qub inaga soo yidhaahda Heeso iskugu jira guubaabo, daltabyo, calaacal–tawaawac iyo ammaan mano-sheegashadu ku dheer tahay. Sidiiq Maxamed Burmad mid kamid ah mashiinadii hoboladii Xidigaha Geeska gacanta weyn ka gaystay, in ay wacadaro ka dhigaan Masraxyada Hargeysa.
Mar kale waa warshaddii soo saartay ama ina bartay Axmed Arshe iyo Cabdirisaaq Anshaxba mucda heesaha uu u dhiibay darteed. Sidoo kale waa Suugaanyahanka leh mid kamid ah saddexdii heesood ee ibo-furka u ahaa heesaha Nimcaan Hilaac. Heestiisii ugu horeysay ee Miyuusig loo tumo ee uu alifey waxa ay ahayd Xalaawatul Laws. haddaba halkan ka daalaco Suugaanta uu curiyey gaar ahaan Heesaha Miyuusiga loo tumay ee ay qaadaan hooballadeennu.
Kuna sheeggay jeefaafka -codka Mursal muuse.
Ilaa hadda muu bogsoon dheh
Mar wuu baaxaa dagaa dheh
Mar wuu isku buuqayaa dheh
Baraaruga wuu nacaa dheh -Nimcan Hillaac
Waanay kuu dhaboobayn
Waa dhimbiil hinaasuhu -Barwaqo Qalanjo
Ladnaantana haygu hoojin. -Maxamed Bk
Xanuunka jacaylku xoog u badnaa
Anoo xayirnaa dartaa xawilnaa–
Xawilnaa xogtayda halka aan ku sugnaa
Xalaal dhaladeey Xalaawatul laws. -Nimcaan Hilaac
Laabtayda maanqaad -Anshax
7] Waxan guudka saarta
Waanan raalli geliyaa
Bal inaan la kala go’in -BK
8] Dugsi loo hiloobiyo
Waa waxa haween baday -Ugbaad aragsan
Caashaqu dan guud maaha
Waa dulsare uma baahna – A. Aarshe.
10] Hormood meel aad u tahay
Hadafbay wada qabaan –Xidigaha Geeska
11] Dalkaa kuu baahan kuu baahan
Barwaaqada aan helnee soo bixi soo bixi Bulshooy
soo bixi cashuurta -Xidigaha Geeska
12] Bartu waa Garoon
Sacab badan haloo tumo – X. Geeska
13] Haweenbaa hoodo sheegta
La’aantood lama heleenba -Xidigaha Geeska.
14] Anigu cidna uma xagliyo
Xukuumadda lama safani
Xisbina waligay ma galin
Xer gaaraana uma shaqayn
Dadkaan xulafaysi nahay -Xidigaha Geeska.
15] Nabadeey warkaa sheelan
Nin ku waayeybaa sheega
Nasannoon habeen seexan
Noloshana ku guul seega -Xidigaha Geeska
16] Udugaagu waa cuudka
Ama cadar i soo jiita
Midabkaagu waa caynka
Ma cidbaa ku gaadhaysa?
Calaashaan iftiinkaaga ! -Axmed Aarshe.
17] Dugsiiya Alloow dejiya daalka iga bi’isa
Ii dul badanoo iina debecsanoo iina dumareysan -Cabdirisaq Anshax
18] Maxaan hagardaamo qabay
Hadmaan caawana is keenay?! -Anshax.
19] Mar waan kugu dawoobaa
Ama daa i daayoo
Meel kale u diga-rogo -Anshax.
20] Inaad isku dookhtihiin
Isdaawada aad tihiin -Bk
21] Laabtaada adigoo ku qorey ruux isqaban waayey
Qof nool lagama quustay naftani qiil ka dhigataaye
Qaflad ruux ku sugan show illeen male qaneecaade
Qaadiroow Allahayoow adigu qumane ii soo xul –Xamda Cabdi, Xamda-kuwiin.
22] Wanaagu dhibaaga
Jacayl ka dhantaaga
Xumaan u dhafraaga
Dhagteenu ka awdan -Yusuf Hanad iyo Asma Love
23] Ma beelbaa beel wax dheer
Ka iman boodh iyo candhuuf?
Badhkood yaa hoos u dhigay?
Bulshooy waad liidataan!
24] Maku tidhi hortay cidi i hoo oo i hano Hoodo?
Maku tidhi hortay waan ka helay hadal macaankaaga?
Anna hoo warkaygoo jacaylkaagu i hel maanta
Luqunteeda taakada hal dheer hilibka laallaabmay
Hoogaanso kubabkeeda eeg kor iyo hoos buuxa
Dibneheeda yaa kala hadhoo haysta ragi leeyayiyo
Dhaayo hanaqaa ku jara haamadiyo laabta.
Kol hadaanan kaa haysan karin hanatay laabtiiye
Maysku kaa halleeyaa aduu hadal ku joogaaye? -Axmed Arshe
25] Hugunkani ma faraxbaa?
Hanku maanku laasimay
Soo maan u hagar bixin! -BK
26] Ulashadu jujuub maaha
Aqballaada kaa diiday
Ubaxeey ilmada jooji
Urugada kadaa maanka
Oo oori qaba fiican -Yuusuf Jeego.
27] Qalbigu wuu taamayaa
Hargeysa kamaan tageen -Yurub Geenyo
28] Dab iyo axdigii digaad ka dhigtoo
Anoo kuu dabacsan baad dig tahee
Maxaad ka dudaa aan ka daayee -Aarshe
WQ: Jamaal Ibraahin Dasuuqi